ဖိုး မတန်တဲ့ ပန်းရယ်လို့
လက်မကမ်း ချင်လဲ လေ..
လွမ်း တ စွာနဲ့.....။
Posted by မမသီရိ at 12/05/2008 04:51:00 PM
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄ နှစ်
နှင်းတွေ နဲ့ မိုးတွေ နဲ့
ဒွေးရော ယှက်တင်.. ကမ္ဘာမြေပြင်မှာ
ရော နေတဲ့ ညနက်နက် တစ်ခုမှာ
မေမေ့ဆီ ရောက်ခဲ့ တာပေါ့..
လင်းလက်တဲ့ မျက်ဝန်း အစုံ နဲ့
လောကထဲ ကို ထိုးခွဲ ကြည့် ဘို့..
မေမေ့ ဘေးနား သမီးလေး ရောက်ခဲ့ တာနော်...
မေမေ ပျော်ရင် ပျော်
မေမေ ငို ရင် ငို..
မေမေ မဲ့ တော့ မဲ့
မေမေ တွေ ဝေနေတဲ့ အခါမျိုး မှာလဲ
မေမေ့ ဘေးနား သမီးလေး.
မကြာတော့ တဲ့ ကာလ တစ်ခုမှာ
လောကကြီးထဲ တိုး ၀င် ဘို့
မေမေ့ ရင်ခွင် ကို
မေမေ ရင် ဆိုင် ရတော့မယ် မီး ရယ်...
တစ်ကယ်တော့ သမီး ဟာ..
မေမေ့ အပေါ် နားအလည်ဆုံး..
မေမေ့ အတွက် အရာရာ ခံ စားပေ ခဲ့ တာ..
ကျေးဇူး တင်ပါ တယ် မီး ရယ်...။
မေ့ သမီးရွက် လွှင့်တော့ မယ့် ရက်တွေ အတွက်
မေမေ တင် ကြို သတ္တိတွေ မွေး နေခဲ့ ပြီ..
မေ့အနား က ခွာသွားတော့ မဲ့ မေ့ သမီး အတွက်
မေမေ ကြို တင် လွမ်း ဆွတ်နေရပြီ...
လောက အလယ် မွှေးပျံ့ လာမဲ့
မေမေ့ ပန်းပွင့် လေး အတွက် ..
မေမေ တင်ကြို ကြည် နူးနေခဲ့ပြီ..။
မေ့ သမီးဟာ
မေမေ့ အတွက် တော့
မေမေ့ အတွက် အမြဲ လိမ္မာပေးခဲ့ တာ..
ကျေးဇူး ပါ သမီးလေး ရယ်...။
(၂၀.၁၁.၂၀၀၈ မှာ ကျရောက် တဲ့ ချစ် သမီး..`အလိမ္မာ` ရဲ့ ၁၄ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အတွက်..)
Posted by မမသီရိ at 11/21/2008 01:15:00 PM
ဆုံခဲ့ တဲ့ အကြောင်းပြန်ပြောင်း စဉ်းစား
လွမ်း သင့်သလား လို့လေ.....။
အကြင်နာ ထဲ အရောင်တွေ ကဲ သလား
ရေစက်ကယ် ကြုံ ဆုံစေခဲ့လဲ..
ငြိုး အတေးများ ရေး မှတ်ထားသလား..
ရင်မဆန့်အောင် ပိတ်လှောင် အလွမ်း
နွမ်းလျ မပြေ ဆယ်နေ ပူကဲ
တင်းကျပ် မွန်းလျက်ပါပဲ လေ....။ ...။
Posted by မမသီရိ at 11/20/2008 03:56:00 PM
တဂိုး၏ အချစ် စာစုများ
တစ်ကယ် တမ်းပြောရရင် ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ဒီစာစုလေးကို ဖေါ်ပြဘို့ အချိန်အတော်လေး ယူခဲ့ရပါ တယ်..။ မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဂါ လောကလေး ကို ကျွန်မ တတ်နိုင်သလောက် လေ့လာကြည့်တော့ အများစု က တစ်ကယ့်ကို ရည်ရွယ်ချက်ကောင်း.. အတွေး အခေါ် ကောင်း.. ခံစားမှုကောင်း.. တင်ပြမှု ကောင်းလေးတွေနဲ့ ကြိုးစား ပမ်းစား ရေးသာ တင်ပြထားတာတွေ တွေ့ရတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားငယ်မိပါတယ်..။
အချိန် အတော်ကြာ စဉ်းစားပြီး တဲ့ နောက် မှာ တော့
ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ..ကဘောက်တိ ကဘောက်ချာ.. မတောက် တစ်ခေါက်လေး နဲ့.. မြန်မာ ဘလော့ဂါ လောကထဲ မရဲ တရဲ တိုးဝင်မိချင် တဲ့ အတွက် ဘယ်သူ ကမှ ရယ်ပွဲ မဖွဲ့ လောက်ဖူးရယ် လို့ ဇွတ် အားတင်းပြီးတော့ ..
ငယ်ငယ် တုန်းက အမြတ်တနိုး ၀ယ် ယူ သိမ်းဆည်းဖူး တဲ့ ရာဘင်ဒြာနသ်တဂိုး .. တဂိုးစာနုယဉ် ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲ က နှစ်သက် ခံစားမိတဲ့ စာစု တစ်ချို့ ကို ပြန်လည် မျှဝေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်.. ။
ကျမဆီမှာ ခုလက်ရှိနေတဲ့ စာအုပ်က စာပေလောက စာအုပ်တိုက်က ၁၉၉၈ မှာ ဆဌမ အကြိမ် ပြန်လည်ပုံနှိပ်တဲ့ ၁၉၇၆ သြဂုတ်လ က တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ် ပါ...။ ပါဝင် ဘာသာပြန်ဆိုသူတွေ က မိုးမိုး (အင်းလျား) ၊ မောင်ဇေ၊ မောင်မျိုးညွန့်၊ ပုသိမ်မောင်းစိမ်းသူ၊ မောင်သန့်စင်၊ တက္ကသိုလ်ညိုဝင်ေးအာင်နဲ့ တက္ကသိုလ်မိုးမိုး တို့ ဖြစ်ပါတယ်..။
မင်းရဲ့ အသဲတံခါးကို ပိတ်မထားလိုက်ပါနဲ့ နော်`
မင်းရဲ့ စကားတွေ က နက်နဲ လွန်းလှတယ်.၊
ကိုယ်ဖြင့် နားမလည် နိုင်အောင်ပါပဲ အချစ်ရယ်`
မျက်ရည် တစ်စက်... လင်္ကာ တစ်ပုဒ်နဲ့ အတူ.၊
ပေးဆပ်ဖို့ သက်သက် မဟုတ်လားကွယ်..`
ကိုယ်ဖြင့် နားမလည် နိုင်အောင်ပါပဲ ကွယ်`
`ပျော်ရွှင်မှု ဆိုတာ တဒင်္ဂပါ..၊
ရယ်မော လှုပ်ရှားလိုက်ရုံ နဲ့ ဘ၀ ချုပ်ငြိမ်းသွားတတ်တယ်တဲ့..၊
သည်တော့ တမ်းတ လွမ်းဆွေး ရတတ်တဲ့
မင်းမျက်လုံးတွေ မှာ နိုးကြားပါစေကွယ်...`
ကိုယ်ဖြင့် နားမလည် နိုင်အောင်ပါပဲ ကွယ်..`
နေမင်းရဲ့ ရောင်ခြည်အောက်မှာ ပွင့်လန်းကြတယ်၊
သူ့မှာ ရှိသမျှ အားလုံး ဆုံး ရှူံးရတယ်..၊
ဆောင်းရာသီရဲ့ ဆုံးစ မရှိတဲ့ မြူနှင်းတွေ ကြားမှာတော့
အဖူး အငုံလေးတောင် မကျန်တော့ ဘူးတဲ့..`
ကိုယ့်လက်ထဲမှာ မေတ္တာပန်း တစ်ပွင့်
အသည်းနှလုံး ကို ခိုးသွားတယ်..
ပြီးတော့ ကောင်းကင် အနှံ့
အဝေးကို ဖြန့်ကြဲ လိုက်ပါတယ်..။
သူ ဘယ်သူ လဲ ဆိုတာ သိပါပြီလား..
ဒါမှ မဟုတ် နေရာတကာမှာ
သူ့ကို ရှာနေဆဲ ပဲလား
သုခ ဝေဒနာ လေလား
ဒုက္ခ ဝေဒနာလေလား ကွယ်...။
Posted by မမသီရိ at 11/13/2008 11:23:00 PM
Labels: တဂိုး၏ အချစ်စာစုများ
ပေါ်မလာ မျှော်ရှာမော လို့.
ဗေဒင်စာ မအာ စမ်းပါနဲ့..
Posted by မမသီရိ at 11/13/2008 02:50:00 PM
ဒိုင်ယာရီ မရေးဖြစ်သော ရက်များ အကြောင်း
..... မျက်ဝန်း တံခါး ..ပိတ်လို့ ထား လဲ..
မျက်ရိပ်ရှေ့ မှာ ... သူ ၀င်လာနေ....
ရွှန်းဝေ ပီတိ...စွဲ ငြိစရာ...
မာယာ ကင်းမဲ့... ရီ ဝေလဲ့ လို့
ညှို့ မျက်ဝန်းတွေ... ဝေ့ ၀ဲ နေခဲ့..
...ည နာရီများ...သန်းလွဲ သွားပြီ...
..အိပ် စက်ခြင်းတွေ ခိုး ယူလေတဲ့..
..အလွမ်း တစ္ဆေ စိုးမိုး နေ...
... ရင်မှာ တင်းကြပ် ပန်း ရသတွေ..
အဖြေ မရှိ မေးမိ ပုစ္ဆာ ....
တစ်စုံ ရာ ကို....
.. စက် လဲ မရွှင်.... အလွမ်း ရှင်ရေ....
မင် တံ ထိပ်ဖျား ...မှတ်တမ်း များလဲ...
မွန်း ကျပ်မှု များ.. လွှမ်းခြုံထား တော့...
ကဗျာ တမ်း ခြင်း... စာ ပန်းခင်းတွေ...
...ရင် ထဲ မှာပဲ လှောင်ပိတ်နေ......။
Posted by မမသီရိ at 11/02/2008 03:09:00 PM
မစား မိပဲ မနေချင်....
အရိပ်မှန်းသိ .... (ရက်)..
မဖမ်းမိ ပဲ မနေချင်....
အလွမ်းပေါင်း ကုဋေ ...
အတန်တန် စည်းတွေ တားပေမဲ့...
လျစ်လျူ ရှုချင် စိတ်နဲ့ ရယ်...
နှလုံးသား ဟာ သခင်....
အချစ်များ သာ ဘုရင်....
မဖမ်းမိပဲ... မနေချင် .....။
Posted by မမသီရိ at 10/19/2008 12:21:00 PM
ပုစဉ်း ရင်ကွဲ ရဲ့
နာကျင် မှု ကြားမှာ
ဇီဝ လိုအပ်ချက်ထက် ပိုတဲ့
ချစ်ခြင်း မေတ္တာ တရားတွေ နဲ့....
လိပ်ပြာရိုင်းနဲ့ လေပွေ ကြောင့်
ဖျတ် ကနဲ ကြွေ
Posted by မမသီရိ at 10/10/2008 01:34:00 PM
အရာ ရာ အလိုမကျ...
လိုချင်တာတွေ .. မရ လို့...
မိုးစွန် တမွတ် ကြယ်ကို ဆွတ်မယ်လို့...
Posted by မမသီရိ at 10/08/2008 08:47:00 AM
..ပါးလေးတွေ လဲ ရဲ....
ရနံ့ လေး တွေ မွှေး....
သက်တန်လေးက ရောင်စုံ ဖြာ...
မိုင်းပေါင်း ခရီးတွေ လဲ....
သူ က....ကိုယ့် အနားနားမှာ....
အနားနား ကပ် ပါ..............
Posted by မမသီရိ at 10/06/2008 08:23:00 AM
.... လမင်းလေး က..
မွန်းကျပ်နေတဲ့ ...ဘ၀ က
ခုတော့.... ကောင်းကောင်း သိပြီ....
နာရီ လက်တံပေါ် ထိုင်...
Posted by မမသီရိ at 9/25/2008 03:58:00 PM
နွယ် .. ဆိုတဲ့..သံယောဇဉ်...
Posted by မမသီရိ at 9/15/2008 10:31:00 AM
..... ဖော့ဆို့ ပုလင်း...
စွမ်းဆောင်.. ကြိုးပမ်း... ပိုလို့လွမ်းတယ်....
Posted by မမသီရိ at 9/12/2008 04:56:00 PM
မောင်ဟာ... မေ့ရဲ့ ကဗျာ...
အချိန်တိုင်းမှာ ... အရာရာထက်...
မေ့ အနားမှာ ရှိရင်....
မောင်ဟာ.... မေ့ ကဗျာပါ.............
Posted by မမသီရိ at 9/11/2008 01:11:00 PM
နွေးထွေးတဲ့ ကိုယ်ငွေ့လေးတော့ ထားခဲ့ပါ....
မင်းအတွက် တံခါးတွေ ဖွင့်ပြီးသားပါ.....။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ငှက်ကလေးတစ်ကောင်အတွက် ...............။
Posted by မမသီရိ at 9/10/2008 03:03:00 PM
အခြေအနေ... ၀န်းကျင်တွေ အားလုံး...
လာလမ်းကို ပြန်ချိန် ကျရင်...
ဝေဒနာ ရင်မှာ ပါမသွားစေဘို့...
မင်းဖြစ်ချင်တာ ဘာမဆို... ခု... ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်.....
တစ်ကယ်တော့ ဒီကဗျာလေး ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အတော်တော်ကြာကြာ တည်းက ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ
ဒီနေ့ ဘလော့ဂ်လေး တစ်ခု ဆောက်တော့ ဘာရေးရမလဲ စဉ်းစားတုန်း ခေါင်းထဲမှာ ပြန်ပေါ်လာတာနဲ့
နည်းနည်းပါးပါး ပြင်ပြီး ဝေမျှလိုက်တာပါ။
Posted by မမသီရိ at 9/10/2008 12:31:00 PM
ဘလောဂ်ဂါ ဆိုတာ ဘာလဲ လို့ မိတ်ဆက်ပေးလာတဲ့
ဘလောဂ်ဂါ မောင်လေးတစ်ယောက်ကြောင့် ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ဂ်လေး တစ်ခုရှိရင် ကောင်းမှာပဲ ဆိုတဲ့
အတွေးလေးနဲ့ ဒီ ဘလော့ဂ်လေးကို ဖန်တီးဖြစ်တာပါ
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ သာမန်ဘ၀၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ခံစားချက်လေးတွေကို
Posted by မမသီရိ at 9/10/2008 11:28:00 AM